Hong Kong (Shina) · Janoary, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Hong Kong (Shina) · Janoary, 2008
Tantara mikasika ny Hong Kong (Shina) tamin'ny Janoary, 2008
Shina sy Hong Kong: Jet Li sy ny fitiavan-tanindrazana
Tselatra · Shina17 Janoary 2008
Diumanpark no namaham-bolongana momba ny resadresaka nifanaovana tamin'ilay mpilalao sarimihetsika malaza Li Lianjie fantatra amin'ny anarana hoe Jet Li any amin'ny fahitalavitra T.V interview, indrindra ny momba ny fijeriny amin'ny fitiavan-tanindrazana. Ho an'i Jet dia ny fahafaham-pieritreretana na ny fahafahana misaina malalaka no zava-dehibe kokoa (zh).
Hong Kong : fanavotana ny Lung Mei
Fampandrosoana11 Janoary 2008
Natsangana ny bolongana vaovao iray hanavotana faritra mando iray ao Hong Kong (zh). Maminavina hanao fandaniambola hatramin’ny HKD130 000 000 ny governemanta hananganana tora-pasika voatr’olombelona ao Lung Mei, faritra mando voajanahary ao Taipo. Mihetsiketsika amin’ny fanangonan-tsonia sy famokarana lahatsary hanoherana izao fandravana ny tontolo iainana izao ny olonineto (netizens).
Hong Kong: ny nampisy adihevitra indrindra: OAT
Fahalalahàna miteny02 Janoary 2008
Raha inoana izay nosoratan'i Ben Ng, izay mazoto indrindra amin'ny famahanam-bolongana ao Hong Kong, dia ny fametrahan'ny Tribonaly no lahatsoratra mampiseho vetaveta no nampisy resaka indrindra tamin'ny tontolom-bolongana tao Hong Kong tamin'ny taona 2007 (resiny noho izany ny fifidianana filohan'ny mpanatanteraka vao haingana teo). Ny tamin'ny herintaona (2006) moa dia ny Uncle Bus...